New Day Jobs | How to writeaqualified CV | Career Blogs
Career Advice 26 Nov 2019
အလုပ် တစ်ခု ကို စတင်လျှောက်တဲ့အခါမှာ သင့်ရဲ့ CV က အခြားသူများထက် ထင်သာမြင်သာဖြစ်ဖို့နဲ့တိကျရှင်းလင်းဖို့လိုပါတယ်. ကိုယ့် အကြောင်းကိုလည်း ကောင်းမွန်စွာပြောပြဖို့ အရမ်းအရေးကြီးပါတယ်။ သင်က ဘယ်လိုလူမျိုးလဲဆိုတဲ့ first impression ကို သင့်ရဲ့ အလုပ်ရှင် ကမြင်တွေ့ရမယ့်အရာ ဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ CV တစ်ခု တည်ဆောက်တဲ့အခါမှာ အောက်ပါ အကြောင်းအရာများ ပါဝင်ထည့်သွင်းးစဉ်းစားရန် လိုအပ်ပါတယ်။
CV တစ်ခုကို တည်ဆောက်တဲ့အခါမှာ သင်ဖော်ပြချင်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာပြပါ။ သင့်ရဲ့ လိပ်စာ၊ဖုန်းနံပါတ်၊ဆက်သွယ်ရမည့် email address စတဲ့ အရေးကြီးသည့် အချက်လက်တွေကို မှန်ကန်စွာ ထည့်သွင်းရမယ်။ ထင်သာမြင်သာတဲ့ နေရာမှာ ထားရှိဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။အဲ့တာအပြင် သင်ရဲ့ သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်း အတွေ့အကြုံတွေနဲ့ ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်တွေကို ရေးတဲ့အခါမှာ Keywords တွေပါအောင် ရေးရမယ်။
၂။ အလွန်အကျွံ တန်ဆာဆင်မှုများကို ရှောင်ပါ။
CV တစ်ခုမှာ အတတ်နိုင်ဆုံး ကာလာအရောင်ကို နှစ်ရောင် (သို့မဟုတ်) သုံးရောင် ထက်ပိုပြီး အသုံးပြုတာ၊လုံးဝမလိုက်ဖက်တဲ့ အရောင်တွေကို တွဲဖက် အသုံးပြုတာတွေက အမြင်အာရုံကိုရှုပ်ထွေးစေနိုင်တယ်။အဲ့တာကြောင့် အဲ့လိုပြုလုပ်တာမျိုးတွေကို ရှောင်ရှားသင့်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် font size, font, format တွေက ဖော်ပြချင်တဲ့ အကြောင်းအရာလိုက် ကွဲနေသင့်ပါတယ်. အဲ့အတွက် စံသတ်မှတ်ချက်တစ်ခု ရှိထားသင့်ပါတယ်။ဥပမာ - လုပ်ငန်းတာဝန်တွေကို font size တစ်ခုတည်းအဖြစ် ထားတာ၊တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ဖူးတဲ့ ကုမ္ပဏီနာမည်များကို bold ထားတာမျိုး ပေါ့နော်။ ပုံသေသတ်မှတ်ချက် မရှိ, သပ်ရပ်မှုရှိတဲ့ CV ကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့် Hiring Manager (သို့မဟုတ်) လုပ်ငန်းရှင်က သင့်ကို အလုပ်လုပ် တဲ့အခါမှာ သေချာမူမရှိတဲ့သူလို့ မှတ်ချက်ချနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့် ဂရုစိုက်ဖို့လိုပါတယ်။
၃။ ကျစ်လစ်သိပ်သည်းစွာ ရေးပါ။
သင့် CV မှာ မလိုအပ်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို အလွန်အကျွန် ထည့်သွင်းတာမျိုးရှောင်ရှားပါ။ ဥပမာအားဖြင့် လုပ်ငန်းနဲ့သက်ဆိုင်မှုမရှိတဲ့ အကြောင်းအရာတွေနဲ့ hard skills တွေအစား soft skill တွေကို အလွန်အမင်း ထည့်တာမျိုး၊ ဟိုးငယ်ငယ်တုန်းက state ကျောင်းမှာ ရရှိဖူးတဲ့ ဆုတွေကို တသီတတန်း ဖော်ပြတာမျိုး မလုပ်သင့်ပါဘူး။ ဒါ့အပြင် သင်ရရှိထားသော အောင်မြင်မှုကို စာတတန် ပေတတန်ဖြင့် ဖွဲ့နွဲ့ ရေးသားခြင်းထက် အချက်အလက်တွေနဲ့ဖာ်ပြပေး တာက ပိုပြီး သင့်တော်ပါတယ်။ယေဘုယျမအားဖြင့် CV တစ်စောင်က ၁ မျက်နှာကနေ အများဆုံး ၃ မျက်နှာသာ ရှိသင့်သည်။ (မှတ်ချက် ။ ။ တချို့ကတော့ အတွေ့အကြုံတွေ, အကြောင်းအရာတွေ ပေါ်မူတည်ပြီး စာမျက်နှာ ၅ မျက်နှာ မှ ၇ မျက်နှာ ထိ ရေးကြပါတယ်။ ဥပမာ -Graphic Designer အနေနဲ့ သူကိုယ်တိုင်လုပ်ထားတဲ့ တွေကို ထည့်သွင်းဖော်ပြတာမျိုး)
၄။ အချိန်ကို လက်ရှိကနေ အတိတ်ဖြစ်အောင် စီပါ။
သင့် CV မှာ ပါဝင်တဲ့ အချက်အလက်တွေကို စီရာမှာ နောက်ဆုံးဖြစ်တဲ့ အကြောင်းအရာကို ဦးစားပေးပြီး ဖော်ပြပေးသင့်ပါတယ်။ အလုပ်အကိုင်ဆိုရင် လက်ရှိ (သို့မဟုတ်) နောက်ဆုံးလုပ်တဲ့ လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ ကိုအရင်ပြောပြပါ။ကျောင်း (သို့မဟုတ်) သင်တန်: ကိုယ်လျှောက်တဲ့အလုပ်နဲ့ ကိုက်ညီတဲ့အရာ(သို့မဟုတ်) နောက်ဆုံးတက်ရောက်ခဲ့တဲ့ သင်တန်းများကို ဦးစွာဖာ်ပြသင့်ပါတယ်။ အဲ့လိုလုပ်ခြင်းက အလုပ်ရှင်(သို့မဟုတ်)သက်ဆိုင်ရာ မန်နေဂျာကို ကူညီရာရောက်ပါတယ်။ သူတို့က လတ်တလော အကြောင်းအရာများကို လွယ်ကူစွာ သိရှိစေနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
၅။သင်ကျွမ်းကျင်တတ်မြောက်သော အရည်အချင်းများကို ပြည့်ပြည့်စုံစုံ ဖြည့်သွင်းပါ။
သင့် CV မှာသင်ကျွမ်းကျင်တတ်မြောက်ထားတဲ့အရာအားလုံး ထည့်သွင်းရေးသားပါ။ အလုပ်လျှောက်လွှာဟာ Job Category တစ်ခုကို Cover လုပ်နိုင်တဲ့ အနေအထားမျိူးဖြစ်ရပါမယ်။ဥပမာ - Sales လား? IT လား? Operation လား? အစရှိသဖြင့်ပေါ့နော်။ သင် အဲ့လိုပြင်ဆင်ထားခြင်းအားဖြင့် ရေးသားထားတဲ့ အကြောင်းအရာတွေ ပေါ်မူတည်ပြီး အခြား သက်ဆိုင်တဲ့အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများပါ ရရှိနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံ တဝှမ်းလုံးမှ အလုပ်အကိုင်များကို New Day Jobs မှတဆင့် ရှာဖွေနိုင်ပါတယ်။